Jornaya Activate: Fanaraha-maso eny an-tsena sy fijerena ny fitondran-tena hividianana fiainana lehibe | Martech Zone
Jornaya dia a data-as-a-service orinasa manana fahitana dia mihoatra ny 350 tapitrisa ny fividianana mpanjifa isam-bolana miasa amin'ny tsena anaovan'ny mpanjifa vola amin'ny fikarohana, famakafakana ary fampitahana ireo safidy amin'ny fividianana fiainana lehibe (MLP).
Jornaya Activate dia manome ny hany sehatra fanaraha-maso eo an-tsena sy fomba fijery momba ny fitondran-tena fividianana fiainana lehibe mpivarotra amin'ny fiara, fanabeazana, fiantohana ary findramam-bola.
Ireo mpivarotra dia afaka mahazo ny mari-pamantarana voalohany indrindra momba ny fikasan'ny mpividy, amin'ny alalàn'ny fahafantarana ny mpanjifany sy ny vinan'izy ireo eo an-tsena ho an'ny vokatra na serivisy arosony na raha toa ka manao dia lavitra mividy.
Jornaya Activate dia ahafahan'ny mpivarotra manatsara ny paikadin'ny fampielezan-kevitra, manatsara ny fandraisan'anjara ary manome traikefa ho an'ny mpanjifa tsara kokoa noho ny programa fihazonana, fahazoana ary fivarotana mivarotra. Amin'ny alàlan'ny famaritana ireo mari-pahaizana momba ny fitondran-tena mialoha, ny mpivarotra dia manana fifandraisana matotra sy azo antoka kokoa izay mampitombo ny tahan'ny fahazoana, mivarotra ary mitazona.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Jornaya
Jornaya dia manana fiaraha-miasa sy teknolojia an-trano momba ny tranokala fiantsenana an'arivony sy loharanom-pahalalana momba ny fitondran-tena. Ny vahaolana Activate dia mahazo sy mamoaka angon-drakitra isan'andro azo antoka sy mifanaraka amin'ny fihetsika ataon'ny mpanjifa any Etazonia.
Mampavitrika angon-drakitra hampidirina mora foana ao anaty stacks misy martech amin'ny alàlan'ny Hub of Integrations Jornaya. Io dia ahafahan'ny mpivarotra mandeha ho azy ny fidirana isan'andro amin'ny angon-drakitra Jornaya mivantana ao anatin'ny CRM, CDP, ESP, dialer, na izay sehatra fampiharana marketing tadiavina. Activate integrates amin'ny CRM mihoatra ny 100 sy sehatra marketing toy ny Salesforce, Eloqua, Marketo, HubSpot, ary Velocify.
Ahoana no fomba ahazoana mandeha amin'ny fahombiazana?
Jornaya Activate manampy ny mpivarotra hahatakatra hoe aiza no misy ny mpanjifany sy ny vinavinany mandritra ny diany mividy dia azon'izy ireo atao ny mampifanaraka ny vodin-kazo mifandraika indrindra sy manome traikefa ho an'ny mpanjifa. Ny ekipa fahombiazan'ny Jornaya sy ny ekipa mpanohana azy dia miaraka amin'ny mpanjifa isaky ny mandeha. Manomboka amin'ny fampidirana an-tsakany sy an-davany ka hatramin'ny fakana hevitra momba ny fomba fanao tsara indrindra sy ny paikady, eo i Jornaya hanampy amin'ny fahombiazana mitohy.
Vakio bebe kokoa momba ny Jornaya Activate
Ahoana no iarovan'i Jornaya ny tsiambaratelon'ny mpanjifa
Ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa no zava-dehibe indrindra ao Jornaya. Ampandehano ny manangona fihetsika tsy fantatra anarana, mahazo fomba fijery, ary manatitra azy ireo amin'ny fonosana angona tsotra nefa mahery. Ny vahaolana Jornaya's Activate dia tsy misy fampahalalana momba ny mpanjifa velively. Tsy misy fampahalalana azo fantarina manokana (PII) hita, voatahiry, na zaraina. Jornaya ihany no mandrindra ireo firaketana tsy fantatra.
Tags: MpanjanantanyjornayaJornaya mampihetsikafividianana fiainana lehibemlp